Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » RASMI: Buffon Oo Hogaaminaya Saddex Ciyaartooy Oo Ku Dhawaaqay Inay Ka Fariisteen Qaranka Italy, Miyuuse Iscasilay Tababaraha Azzuri?…Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
RASMI: Buffon Oo Hogaaminaya Saddex Ciyaartooy Oo Ku Dhawaaqay Inay Ka Fariisteen Qaranka Italy, Miyuuse Iscasilay Tababaraha Azzuri?…
Goolhaye Buffon, saaxiibkiisa Juventus Andrea Barzagli iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma Daniele de Rossi ayaa soo gabagabeeyay shaqadoodii xulka qaranka Talyaaniga, halka Giorgio Chiellini la filayo inay inuu qaato go’aan kaas lamid ah.
Dhamaan ciyaartooydaan ayaa isku dar 461 kulan usaftay xulka qaranka Italy, waxayna dhabar jab ay u tahay go’aankooda Taageerayaasha niyad jabsan ee Azzuri.
Goolhaye Buffon ayaa u saftay xulka Italy 175 kulan, waxaana dooqa koowaad ee goolka uu ahaa 20 sanno oo xiriir ah, isagoo kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2006dii.
Buffon waxa uu aamisan yahay in mustaqbalkiisa uu weli noqon doono mid wanaagsan maadaama uu afar jeer ka qeyb galay Koobka Adduunka.
“Waxaa hubaal ah mustaqbal kubada cagta Talyaaniga inuu sameeyay kulankii xalay, sababtoo ah waxaan heysanay kalsooni, awood iyo go’aan ayuu yiri Buffon.
Tababaraha xulka Talyaaniga Giampiero Ventura oo uu qandaraasu dhacayo sannadka 2020ka, ayaa diiday inuu ka hadlo telefishanka qaranka kadib guuldaradii soo gaartay xulkiisa, laakiin waxa uu yimid shirkii jaraa’id ee ciyarta kadib.
‘Ma aanan is casilin weli’ sababtoo ah madaxweyne ayaan weli la hadlin,” Ventura oo 69 jir ah ayaa sidaas ku yiri saxafiyiinta ka qeyb galeysay shirka jaraa’id.
“Waan ka xumahay waxa nagu dhacay, laakiin ciyaaryahan kasta oo heysta fursad uu kusii ciyaaro waxaan rajeynayaa inuu niyad fiican ku ciyaaro.